Filannoo Keenyaa: Sirna kakuu Odigaarrattti tajaajilli TV cufame - BBC News Afaan Oromoo
Filannoo Keenyaa: Sirna kakuu Odigaarrattti tajaajilli TV cufame
Goodayyaa suuraa Deegartoonni Odiingaa Paarkii biyyaaleessaa Uhuruutti osoo eegaa jiranuu
Qondaaltoonni Keenyaa akka tamsaasi kallattii sirna 'kakuu' ogganaa paartii mormitootaa Raayilaa Odiigaa, kan bara darbee filannoo irratti hirmaachu dideef hin kennamne dhorkuuf jecha TV cufan.
Deggertoonni dhibba hedduun lakkaa'aman paarkii handhuura Naayiroobii bakka sirni kakuu warra mormitootu kun itti raawwatamutti walitti qabamaniiru.
Bu'aan filannoo waliigalaa Agayya darbee sababii himannaa rakkoo bakka gara garaatti walfakkaataa ta'uu diduu isaatiin haqamuun isaa ni yaadatama.
Uhuruu Keniyaataan filannoo Onkoloollessa irra deebiyee gaggeeffameen mo'ateera, Obbo Odingaan garuu itti hin hirmaanne.
Pirezedanti Keniyaataan Sadaasa darbe marsaa lammaffaaf kakatanii itti fufan.
Miidiyaanis sagantaa Kibxataa kana akka hin dabarsineef akeekkachisaaniiru, abbaan alangee waliigalaas sirni akkasii kan gaggeessuun sadarkaa gantummaarra ga'a jedhan.
TV dhaabsisuun kun akkamiin ta'e?
TV abbaab qabeenyummaa isaa dhuunfaa ta'an lama - NTV fi Sitizin TV - sa'a 03:10 (06:10 GMT) irraa jalqabee qilleensarraa akka dhibaman, BBC Monitoring gabaaseera.
Karoora Sitizin TV'n sirna 'kakuu' kana gabaasuuf qabu dhowwuuf anga'oonni mootummaa akka qilleensarraa dhabaman isaan dirqisiisuu BBC'tti hime.
Keeniyaa keessatti siginaalii tamsaasaa dhaabbileen midiiyaa cufamuun kanaan dura baramaa miti, gabaastuun BBC Annee Sooy Naayiroobiirraa akka jettutti.
Yeroo darban keessa sodaachisuun kan tureefi dhaabbileen midiyaa tokko tokko ar'atamanillee tamsaasi isaanii beekaa kallattiin addaan hin cinne, jetti gabaastuun keenya.
Sababii sagantaa kanaaf magaalaa guddittii Keeniyaa keessatti manneen barnootaa gariin cufaadha, namoonni maaltu akka ta'uuf jirus hin beekan; muddamnis biyyattii keessa akka jiru gabaasteetti Annee Sooy.
Poolisoonni gara ganamaa paarkicha seenuu dhowwanillee boodarra gadi dhiisan, jetti.
Deggertoonni Odingaa maal jedhu?
Deggertoota isaa keessaa tokko kan ta'e Laarii Oyugiin, sagantaa Kibxataa kana ilaalchisee waanti seeraan ala ta'e hin jiru: "Poolisii amma ga'utti akeekkachiifneerra, nuti ammoo seeraafi heeraan deemna. Heerri Keenyaa, keeyyanni tokko, lammilleen keenyaa hunduu kallattiidhaan aangoo qabanitti fayyadaman eyyama.
"Nutis amma kan as jirru walitti qabamnee mirga aangoo seeraa qabnutti fayyadamuuf; akkasumas keeyyanni 37 mirga nagaan walitti qabamuu ni eyyama. Nuti lammii biyya kanaati, mirga nagaan asitti walitti qabamuun akka heerichaatti pirezedaantii keenya filachuu qabna."
Goodayyaa suuraa Keeniyaataan Sadaasa keessa akka pirezedaantii haaraatti kakatan
Bu'aan filanichaa maaliif mormii godhate?
Keeniyaataan Onkolooleessa 26 sagalee %98 argachuun seeraan irra deebiin filataman ta'us garuu filattoota %39 qofatu ba'ee filate. Sadaasa keessa ture kan eebbifame.
Goodayyaa suuraa Raayilaa Odingaa mo'achuu Keniyaataa hin fudhadhu jedhe
Mo'achuun isaa Odingaatiin fudhatama hin arganne sababiin isaas akka inni jedhutti kutaa biyyaattii muraasaan filatame.
Keeniyaataan filannoo isa jalqabaa Agayya 8 turerrattis mo'atanii ture, bu'aan filanichaa garuu Mana Murtii Ol-aanaa biyyattiitiin "kan ifa ykn mirkaneeffatamuu hin dandeenye" jechuun haqame.
Yeroo filannoo irra deebiif waamichi dhiyaatu Odingaan deggertoonni isaa akka dhiisan gaafate sababiin isaas komiishinii filannoo ilaalchisee rifoormiin taasifame hin jiru jedhan.
Gabaasaaleen midiiyaa akka jedhanitti wal-dhabdeen filannoo Keenyaa baayyee addaan qoode. Filannoo Agayya darbeen booda sababii walitti bu'insaatiin namoonni 50 du'uu isaanii gabaafameera.
Filannoo Keeniyaa: Filannoo waldhabsiisaan Uhuruun pirezidantii ta'uun filataman
Itoophiyaan dubartoota 10 sadarkaa ministiraatiin muudde
Lakkoofsi ministeerota Itoophiyaa 20'tti gadi bu'e
''Humna Oromoo keessattis alattis ni jabeessa''
Waan shan ho'iinsi qilleensa addunyaa akka hir'isuuf ittin gargaaruu dandeessan
'Finfinnee dhugaa ganamaatti deebisuu...'
"Ega waan nyaatamu dhabnee guyyaa sagali"
Pirezidantiin Yugaandaa weellistotaaf maqaa baasan
Maatiin biiliyeenara Taanzaaniyaa ukkaamfame kennaa qopheessan